Hamba-ngemuva kagesi: ukubuyekeza ezinhlobo, izincazelo kanye abakhiqizi
Uma uhlela ukuthenga noma usunayo ezweni, kufanele ukuthi iyiphi Ithuluzi kangcono ekwelapheni inhlabathi. Kungaba kwenziwe ngesandla, kodwa umphumela uyoba kangcono esebenzisa ungumlimi motor, okuyinto ongenza wonke umsebenzi onzima.
Ngaphambi yokufuna lo imishini kumele ayejwayele izinhlobonhlobo amadivayisi, funda kabanzi mayelana nezici zayo futhi basibuze ukuthi umenzi uyabanikeza emakethe ngethuluzi.
Izinhlobo ezinkulu tillers
Electric Motoblock kungenzeka amateur noma professional. Nquma ukuthi iyiphi inketho kungafaneleka kakhulu, ungakwazi unikezwa ukubaluleka isayithi. Uma endaweni ingeqi 10 ares, akufanele asebenzise imali imishini yobuchwepheshe. Lapho endaweni kwamahektare 20 noma ngaphezulu, kungcono uthanda imodeli lulwimi professional. Iqiniso lokuthi abalimi bathintwa engcono tillers okhokhelwayo.
Ukukhetha i kagesi uhambo-ngemuva ugandaganda, kumelwe kukhunjulwe ukuthi imishini esinjalo yizigaba ahlukene:
indlela for ligijima wokusika;
Leyo mikhumbi ethandwa kakhulu yilezo emaphakathi nendawo Mills. Le isixazululo ubhekwa jikelele. Uma imishini kulekelelwa wheelsets nezinamathiselo, umsebenzisi kuzokhulisa uhla umsebenzi owawenziwa. onobuhle okunjalo kukhona icwecwe, kulula ukugcina.
Ububi kuyinto isidingo isicelo ezama ingxenye opharetha ekuphathweni. Hamba-ngemuva kagesi kungase kudingeke lingena bezihlahla, lokhu kuyiqiniso ngoba amamodeli abe namandla kuzenze zibathinte nakakhulu namasondo umile. ukuhlelwa okunjalo kungaba lula isicelo kanye nokusetshenziswa ukudla okuhlukahlukene, kodwa kunciphisa eguquguqukayo kanye kwandisa usayizi ukuthi kwabanye kuyisici ayisisekelo ukukhethwa.
Uma amandla injini engaphansi kuka 4 kW, ungumlimi ngeke nesisindo esincane futhi kungaba evumelana operation endaweni encane. Uma isisindo imishini luyanda 80 kg, amandla singaba 8 kW. Nge isisindo 100 kg umthamo 10 kW.
Hamba-ngemuva kagesi kungenziwa labizwa futhi ngohlobo injini, ikakhulukazi ngumkhiqizi unit. Ochwepheshe ukweluleka uncamela tillers amazwe, njengoba nje kuphela musa akuvamile behluleka, kodwa futhi abe nekghono ephakeme.
Izinhlobonhlobo tillers ngesisindo
Ukudayiswa zingatholakala tillers ezinesisindo ezahlukene. Ultra-ukukhanya ivamile impela, ngoba iyunithi kungasetshenziswa for ekwelapheni ezindaweni ezincane. Miselela i-walk ngemuva uzokwazi ehlohla futhi chopper, ukuze kuthuthukiswe umsebenzi ngaleso indawo nokukhuphula umkhiqizo walo.
Ngakho, sikhetha ukuhamba-ngemuva ugandaganda brand "Khonzani", ububanzi bamba ingeqi cm 30, ungasebenzisa idivayisi in zokugcina, emibhedeni futhi zezimbali. Amandla iyunithi lena 2 amalitha. a. Lokhu ultra-ekukhanyeni uhambo-ngemuva ugandaganda has a isibambo esikhiphekayo, elenza kukwazeke iyiswa e isiqu imoto ngaphandle nobunzima. Ejwayelekile salokhu ikilasi amazinyo umsiki, ezithinta isimo hook. It ikuvumela ukulawula ukhula futhi kuhlukaniswe inhlabathi.
Amandla tillers ingadi kungaba lula. Kulokhu basuke ngokuvamile unikezwe amandla injini engaphansi kuka 4 amalitha. a. Isisindo amadivayisi enjalo uhla kg-60. Kulesi iyunithi kuyoba ububanzi eside okuyinto 90 cm noma ngaphansi. Ukusebenza kulezi tillers kunaleyo ultra-ekukhanyeni, futhi befanele sifeze uhla ebanzi imisebenzi yezolimo. umshini Kulungele ukutshala kuya ku-60 esingamahektare ngosayizi.
Uma sicabanga kancane kagesi uhambo-ngemuva ugandaganda, izibuyekezo mayelana kunconywa ukufunda. Abathengi bathi lokususa amayunithi sinjalo isisindo ongaphakeme. Uma wokusika hits yinhlama esiqinile emhlabeni, zihamba-ngemuva ugandaganda gxuma engakwenza nezinkingana ezithile.
Isilinganiso isisindo tillers
Isilinganiso motor nitawuba nemabhuloki nomthamo 7 l. k., kulesi simo mass yabo ifinyelela 100 kg. Lolu hlobo ongaphakeme funa art kakhulu, futhi asetshenziselwa ukusebenza indawo engamahektare angu-1. Ngokuvamile lezi tillers eyodwa ezingemuva futhi front isivinini ezimbili enikeza maneuverability lapho ukuthuthela zokutshala izindawo aminyene.
Ngokwesilinganiso isisindo tillers kungenziwa agibele amahhashi imishini ezengeziwe, okuvumela egqumeni, Harrow nokufeza eminye imisebenzi eminingi. Isilinganiso umshini isenzo njengoba imishini lulwimi professional, kodwa izindleko zabo namanje aphansi ukwedlula nozakwabo professional.
Heavy motor amabhlogo uzoba isisindo mkhulu kuka 100kg, kuyilapho ukujiya yabo ifinyelela 16 amalitha. a. Lezi amayunithi zenzelwe ukusetshenziswa professional, ngoba ekwelapheni inhlabathi ezindaweni ezinkulu. Zuza amapulazi abo kanye nezinhlangano service ngokuhlanganyela. Ngaphezu kwalokho, lo mshini kungenziwa ifakwe egejeni, wotshani flail, i-trailer, njll imishini Heavy-class enza umsebenzi mini-ugandaganda, okungenzeka ukunxusa ukucutshungulwa inhlabathi. Ngu imisebenzi yayo esemqoka kuzomele sifake yokuhlanza zensimu kusuka udoti neqhwa, kanye ezokuthutha wezimpahla.
tillers Electric futhi balimi - kukhona amadivayisi ngezinye izikhathi okucatshangelwayo njengoba abathengi imishini efanayo sixhumene. Njengoba isibonelo, cabanga onobuhle eziningana balimi tillers, ukuze siqonde ukuthi iyiphi inketho ukukhetha. Ngokwesibonelo, i-brand ungumlimi DDE ET750-30 izobiza ikhasimende in ruble 6000. Le divayisi lunamandla ka 1.02 amalitha. c., noma 750 Watts. ububanzi 300 mm, okusho kuba nomphumela omuhle engxenyeni processing speed ukusebenza.
Uma ufuna ukubala ukuthi isikhathi ozosichitha ku kucutshungulwa inhlabathi, kufanele kukhunjulwe ukuthi ijubane ungumlimi kuyinto 0.4 km / h. A kuzenze zibathinte nakakhulu zokusebenza ububanzi ezophatha ukuqedela inqubo ngokushesha. Kodwa kubalulekile ngesikhathi esifanayo sicabangele izici injini, ngoba kukhona ubuhlobo amandla ububanzi zokusebenza. Kuyinto kanje: 1 ilitha. a. 20 cm. I ngumsebenzi echazwe has a isisindo 8 kg, watusa ukwelashwa ndawo 150 m 2. inhlabathi bamba ukujula kuyinto 220 cm.
Ukuze uthole isithombe egcwele angabhekwa omunye umlimi kagesi - GREENWORKS 27017, ukubaluleka okuyinto mkhulu kunezinhliziyo, futhi kuyoba ruble 13 000. Lokhu imishini lunamandla ka 950 Watts futhi inikeza 350 ngomzuzu. ukucutshungulwa ububanzi 25 cm, kuyilapho ukujula - kudivayisi 20 cm ukala 16 kg, okuyinto lula ukusebenza kwawo ..
Ezinye Abenzi tillers
Uma ufuna ukuthenga i-walk ngemuva, isibonelo, cabangela isibonelo "Krot MC 455", ukubaluleka okuyinto ruble 18 900. Le nguqulo ye-imishini senzelwe ukutshala ku nemibandela epulazini elincane noma endaweni suburban. Imodeli ukusebenza futhi yakhelwe ukusetshenziswa nezinamathiselo ezengeziwe.
Electric ukuhamba-ngemuva ugandaganda nge egejeni, vykapyvatelem Hiller futhi ngeke bandise umsebenzi owawenziwa. Ngosizo iyunithi uzobe Spud, sihlakulele futhi alime ngisho esiqinile. Ukuba khona reverse kuqinisekisa maneuverability kakhulu ezindaweni sezwe nzima. Motoblock "Imvukuzane" Electric kuqinisekisa ukulawula ukhululekile, ukuphepha nokusebenza, izitholele nezinto zokuya elula.
Esinye isibonelo kungenza idivayisi kagesi "Centaur CE-1400", ogama isisindo 15 kg. Ukutshala ukujula 20 cm kanye umthamo okulingana 1.4 amalitha. a. Ububanzi ukutshalwa 36 cm. Lokhu imishini Isikhishwe Sekwedlule 3 iminyaka, futhi namuhla isibe zithandwa phakathi abashayeli bamaloli kanye nabalimi. Ungayisebenzisa sokuvuna umhlaba ukuze kutshalwe, Ukukhipha emsebenzini futhi phansi handling. ama-apharathasi Ifanele infield futhi endaweni suburban, izindawo zokugcina izithombo namasimu evulekile zezimbali.
Okuningi mayelana tillers "Centaur"
Wokuhlelwa kwendikimba umdwebo motoblock "Centaur", okuyinto okwethulwa kulesi bhukwana kuyokwenza ukwazi kangcono ezibekiweko lobuchwepheshe. Phakathi izici ezengeziwe, kufanele wenziwe ithuluzi Ukujikeleza ijubane okuyinto 110 ngomzuzu. Ngesikhathi kokuhlinzwa, motor akudingi yesondlo ezengeziwe, futhi umsindo okuncane kanye vibration wadala uma usebenzisa ugandaganda ukuhamba.
Alternative emakethe izipesheli
Uma ungazange ukwamukela ukuhamba-ngemuva kagesi, intengo eye eshiwo ngenhla, kubalulekile ukuba banake ezinye abakhiqizi. Ngokwesibonelo, model of the Minsk izixaxa Plant Kunamandla ngokwanele futhi enza izinto ezihlukahlukene esindayo. Basuke ifakwe motors Honda, kanye izici zayo idivayisi 6 kuphuma khona velocities. On ezifana idivayisi ukukhwezwa imishini ezengeziwe akufakwanga njengoba standard.
ububanzi ukusebenza ziyahlukahluka kusuka 40 kuya ku-60 cm nge 20 cm ukujula. Ngokukhetha kule yunithi, ungakwazi ukubala hhayi kuphela ukusebenza kodwa futhi ukutholakala isevisi. Kukhona amaphutha kulo futhi obonakaliswe nezinkinga bamba gearshift ukwehluleka ekudaleni uhlelo. Izindleko imishini enjalo kungaba isukela ruble kusuka ku-80 000 kuya ku-85 000.
Uma unesithakazelo kagesi uhambo-ngemuva ugandaganda, intengo okuzoba kufinyeleleke kakhudlwana, kubalulekile ukuba sinake Lander. Umenzi inikeza ukuthengisa medium amandla amayunithi anemisila imishini Honda. Isisindo izimoto ezifana - mayelana 60-70 kg. Ungakwazi ukubala on ijubane 3, kuhlanganise omunye emuva.
izici zayo kulezi tillers kuphuma nokwethenjelwa, kalula zokusebenzela, ukusebenza eliphezulu nge ubuncane petrol kanye nokusebenza noiseless. Letindlela Site ngisho abesifazane nabantu abadala, futhi kusetshenzwe nabo kuyoba izindawo osayizi amancane naphakathi. Izinsiza kusebenza izindleko ruble 49 000.
Motoblock, busebenze ngokuvamile enikeziwe kule ikhithi (engezansi ibonisa Umdwebo olotshiwe amandla injini), kungenzeka ukuthi wenza ngokuzimela. Njengoba isici esiyisisekelo enze yenethiwekhi Uhlaka elenziwe yama-engeli isiteshi ibha. Kunconywa ukuba asebenzise ibhola amabombo, okumele libe i ubukhulu ezifanele ukudala ukushelela umphumela. Isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo phezu izimbazo zethusi kungenziwa exhunywe kwi-elementi efanayo motor kufanele sisetshenziselwe bhande.
Hamba-ngemuva kagesi ngezandla zakhe senziwa ukusetshenziswa ummese, ezizohlinzeka phansi handling. okunamathiselwe Abo shaft bunikezwa ukhiye. isilawuli Ukunyakaza kuqinisekiswa inkinobho isendaweni umnikazi isibambo. Tillers kukhona okuzenzela motor kagesi, okuyinto ixhunywe kwinethiwekhi nge wire nilimaza emhlabeni bobbin.
Yesigcilikisha Glass: izici zohlelo lokusebenza
Funda indlela ukuxhuma Umshini wokuwasha izitsha ngokwakho
Waterjet cutting metal ngesandla. Waterjet cutting metal
Ngingaba baphuze ubisi ngoba kolwelwesi?
Kanjani ukwakha imisipha esifubeni ekhaya
Izakhiwo zamagnet kanye namandla ensimu yamagnetic
Whisky Tullamore Dew. whiskey Irish: kuzibuyekezo, izintengo
Indlela bazithola mkhakha? izimfihlo lokuzibusa
Brendon Dzhekson: Biography futhi umsebenzi
Isitaki TCP ip yezifiso Windows
Izibuyekezo of the movie "Inkosi yami." Incazelo ugobe, ukubuyekezwa kanye nabalingisi